admin – BEE Data Myanmar
ERP System တစ်ခုကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ???
ERP System တစ်ခုကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ??? မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Data များစနစ်တကျရှိပြီး လိုအပ်သည့်များ စုဆောင်းထားနိုင်ချင်းသည် ERP စနစ်တစ်ခု စတင်ရာ လုပ်ငန်းလွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အကောင်းဆုံးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ပေးမည့် Dataအချက်အလက်များ သေချာမှုရှိခြင်းသည် စနစ်တစ်ခု စတင်ထည့်စေရန် အမှန်တကယ်ကိုပဲ အကူညီဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အဲလိုပြင်ဆင်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုအပ်သည်များ ဆွေးနွေးပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ စတင်နိုင်ပါတယ်။System တစ်ခု Opening စတင်ဖို့ အနည်းဆုံး ဘာတွေ ပေးဖို့လိုအပ်ပါလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်Contacts List တွင်IsaCompanyIsaCustomerIsaVendorPayment TermsAddressInventory Opening တွင်LocationProductLot Serial Number( Product သည် Lot/ Serial Number ရှိပါက)Expired […]
ERP System ကို ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
Posted By: adminPosted on November 17, 2020 November 17, 2020
ERP System ကို ဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ ERP System ကို မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားမဆို အသေးစား လုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းအကြီးများအထိ အဖွဲ့စည်းများအားလုံး က ERP System ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 💹 Trading Distribution လုပ်ငန်း များ၊ 💹 Retail အရောင်း လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Warehouse လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Project Management နှင့် Services လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Manufacturing လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Construction လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Hotel လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Clinic Hospital လုပ်ငန်းများ၊ 💹 Education လုပ်ငန်းများ၊ 💹Freight […]
Posted By: adminPosted on October 1, 2020 October 1, 2020
Odoo Accounting ERP System အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမှ အသုံးအဝင်ဆုံးနဲ့ သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ Accounting အပိုင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Odoo Accounting ဟာ များပြားလှတဲ့ အလုံးစုံသောAccounting Tasks များရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကို Automates စနစ်နဲ့ လည်း သူကလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်တဲ့ modern interface ကနေ Invoices တွေကို အလွယ်တကူ ထုတ်နိုင်အောင် လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပေးထားပါတယ်။ Payment method မှာဆိုရင်လည်း Cash ဖြစ်စေ Bank ဖြစ်စေ လွယ်လင့်တစ်ကူ ငွေပေးချေနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Legal statements တွေကိုလည်း အသေးစိတ် စုံလင်စွာနဲ့ Reports တွေမှာ ဖော်ပြပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။အခြားသောERP System တွေမှ မတူကွဲပြားတဲ့ Odoo Accounting […]
ERP implementations လုပ်မယ် ဆိုရင် ဘာတွေ သိထားသင့်ပါလဲ ?
Posted By: adminPosted on July 20, 2020 July 26, 2020
ERP implementations လုပ်မယ် ဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းတွေမှ ဘာတွေ သိထားသင့်ပါလဲ ? ပြောင်းလဲမှုတွေအမြဲဖြစ်ပေါ်နေသလို ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ အားကောင်းလာခြင်းများနှင့်အတူ Online ကမ္ဘာကြီးမှာ Demand တောင်းဆိုချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ERP နည်းပညာတိုးတတ်မှုတွေ ပေါ်ထွန်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ရဲ့ ရေစီးချောင်းများနှင့်အတူ Digitalize business တွေ ပြောင်းလဲတာနှင့်အမျှ လုပ်ငန်းများရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ Outdated ဖြစ်သော Business Modern လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှ ခေတ်နှင့်အညီ လိုသောအချက်အလက်များ ၊အတွေ့အကြုံ များပေါ်မှမူတည်ပြီး Management Techniques တွေနဲ့ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ ကို ကောင်းစွာ စီမံမှုနိုင်ဖို့ရန် ERP Implementation အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်နေစဉ် […]